Barcelona oo siyaasad cusub u adeegsaneysa soo qaadashada Griezmann, iyo sababta qasabtay. – Gool FM
Abdirashid Mohamud July 11, 2019
(Barcelona) 11 Luulyo 2019. Wararkii ugu dambeeyay ee Spain ka yimid waxa ay sheegayaan in kooxda Barcelona ay ku laabaneyso Bangigeeda si ay ugu dambeyn Atoine Griezmann lacaga heshiiskiisa lagu jebinayo ay u bixiyaan oo ay lasoo saxiixdaan.
Kooxda reer Catalonia ayaa dooneysay in ay la xaajooto Atletico Madrid, si ay kaga la hadlaan in lacagaha ay xiddiggan ku qaadanayaan ay dhowr jeer kala bixiyaan, hase ahaatee, Los Rojiblancos ayaa diidday inay la fariisato Barca.
Atletico agaasimaheeda fulinta Miguel Angel Gil Marin ayaa caddeeyay inuusan dooneyn in Azulgrana uu kala xaajoodo arrinta Griezmann sida uu ku wargeliyay dhiggiisa Barcelona ee Oscar Grau kullan ay Khamiistii lasoo dhaafay wada qaateen ka dib.
Maalmihii ugu dambeeyay Grau waxa uu isku dayay inuu la fariisto maamulka kooxda Caasimadda ka dhisan, balse Gil Marin ayaa ku adkeystay inuusan la hadlin Barca.
Sidaas darteed, kooxda La Liga ku guuleysatay xilli ciyaareedkii tagay ayaa ku laabaneyso Bangiyadeeda iyadoo soo diyaarineysa 120m oo Euro oo ah lacagaha lagu jebin karo qandaraaskiisa.
Maalmaha soo aaddan ayay lacagtaas Barcelona u gubineysa maamulka La Liga si toddobaadka dambe ay ula soo wareegaan guud ahaanba xiddiggan.
Weeraryahanka Faransiiska ah ayaa lagu soo warramayaa in horraan uu heshiiska shaqsiga ah la meel dhigay kooxda Barcelona.
Rivaldo oo ka hadlay xiddig uu u arko inuu u qalmo ku guuleysiga abaal marinta Ballon d'Or 2019